Muwaadiniin Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac xalay loogu geystay dalka Koonfur Afrika – Hornafrik Media Network
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac xalay loogu geystay dalka Koonfur Afrika
Dalka Koonfur Afrika xalay waxaa dilay iyo dhaawac loogu geystay muwaadiniin Soomaaliyeed, ku noolaa dalkaas.
Kooxo hubeysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa la sheegay inay xaafadda Soomaalida ku badan tahay ee Bellville oo ka tirsan magaalada Cape Town ay weerar ugu geysteen dhalinyaro Soomaaliyeed, iyagoo dilay wiil ganacsade ahaa, halka ay dhaawac u geysteen mid kale.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Nuur Degeb, halka midka la dhaawacay magaciisa lagu soo koobay Mustaf.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dilka kadib ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan kuwa Booliska oo bilaabay howlgallo lagu baadi goobayo burcadii ka dambeysay falkaasi, inkastoo aan weli la sheegin cid loo soo qabtay falkaas.
Weerarkaan ayaa noqonayo kii labaad oo sanadkan cusub ee 2020-ka Koonfur Afrika loogu geysto ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas.
Inta badan Soomaalida ayaa dil iyo boob kala kulma rag burcad ah oo u dhashay dalka ay ku noolyihii ee Koonfur Afrika, mana muuqato qorshe ay dowladdu wax uga qabaneyso dhibaatooyinka is daba jooga ah ee dalkeeda loogu geysto dadka Soomaaliyeed.
Wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye oo gabi ahaanba saakay la xiray+Sababta